Irina Shayk Nude And Topless UKUGQIBELA Ingqokelela - Irina Shayk
U-Irina Shayk ohamba ze kunye noPhezulu oluPhezulu oluPhezulu oluQokelelweyo
Jonga imodeli yaseRussia u-Irina Shayk ohamba ze abucala kunye nemifanekiso engenasinxibo esiyiqokeleleyo! Eli bhinqa lishushu kakhulu yenye yeempawu zefashoni, kwaye lenze iifoto ezininzi ze ze, kunye nelona liphezulu kwiphephancwadi elidumileyo lezeMidlalo!
Nanko u-Irina Shayk kwimifanekiso yakhe emitsha ayenzele ilingerie brand Intimissimi. Ubonise iingono kunye neebhonsi kwi-bra-see kunye neepanty!
Irina Shayk imifanekiso yabucala ehamba ze
Jonga imifanekiso ka-Irina Shayk ehamba ze ehamba ngeefoto zikaSteve Erle zeSports Illustrated (2007). Isupermodel yaseRussia ibonisa iititi zayo ezineeasolas ezimbi njengoko ibeka phezulu ehotele eMoscow. UShayk wayeshushu kakhulu kwiminyaka eli-14 eyadlulayo!
Igalari yokuqala iqulethe umzimba ka-Irina Shayk ohamba ze, ii-boobs ze kunye ne-pussy. I-selfie yakhe yabucala ayivelwanga, kwabelwana ngayo ngu-Irina ngokwakhe kwi-Instagram yakhe nakwi-Twitter. Lungiselela ukubethwa ngumoya wale Victoria's Secret kunye nenye yeemodeli ezihlawulelwayo kakhulu ngeenxa zonke! Yonwabeleni abantu!
Irina Shayk ze iifoto
Imodeli ebhityileyo ikhuphe zonke iimpahla kwiilensi zekhamera yefoto, yabutyhila bonke ubuhle bayo! Usibonisa ii-boobs zakhe, iesile, kunye nesilayidi sepussy echetyiweyo. Bonke abafundi bam abathembekileyo bayazi ukuba ndingumlandeli weemodeli ezinqinileyo, kungoku nje ndiyazisela amanzi kule pikniki, kwaye ayingomlomo wam uvuza amathe kuphela (wink) Ewe ndingumgqwetha ndiyayazi loo nto kodwa ' Kulungile, kwaye ngekhe ndiyeke ukugqwetha kwam! LOLz!
Intombi eyayisakuba yintombi kaCristiano Ronaldo noBradley Cooper ishushu kakhulu! Njengoko sibona kwiIrina Shayk uhamba zeiifoto zemagazini ethile, ngubani okhathaleleyo! Iindaba ezaphukileyo kukuba u-Irina no-Cooper bahlukene emva kokuba eshiye ikhaya labo eLos Angeles enomntwana. Emva kokuthandana kwakhe ne-Gaga engathandekiyo, asinakukholelwa ukuba kwenzeka ntoni kwiimodeli ezintle kwezi ntsuku! Tyelela U-Lady Gaga uvuza i-nudes kunye nevidiyo ye-porn !
Umntwana ongaphantsi kukaCristiano Ronaldo kunye UBradley Cooper , Imodeli yaseRussia kunye nobuhle u-Irina Shayk ugqume unganxibanga kwimagazini yaseFrance uMadame Figaro ulapha!
Iifoto zika-Irina zomzimba wakhe oze zeyona nto iphambili kwimagazini yodumo uMadame Figaro… Kwaye ngubani lo mntu ukhathaleleyo ngaloo nto, eyona nto siyikhathaleleyo ngamanqunu akhe ahamba ze, iesile, kunye nepisi. Ngaba ikhona? Kuya kufuneka ndikuphoxe, akukho, onke amalungu alo manenekazi agutyungelwe, nokuba kungazandla zakhe okanye isinxibo esithile okanye ivazi ethile ekwindawo engalunganga ngexesha elingalunganga… bendihlala ndiyicaphukela loo nto, into enye Ndiyayithiya iphonografi ethambileyo. Ukuba wenza iphonografi, sukudlala kunye nam, ndibonise nje ubunqunu kwaye yiloo nto.
Irina Shayk zezeesile
Ividiyo entsha yentengiso yevumba yeGivenchy ibonisa uIrina Shayk iesile ehamba ze esihlalweni. Uhamba ze ngokupheleleyo, kodwa ujikwe ngendlela ebonakalayo kuphela impundu yakhe.
Kwifoto engezantsi kwesikrini sevidiyo, ungabona iesile elihle lika-Irina. Icala elisezantsi kuphela lale foto kukuba asinakumbona ehamba ze. Kodwa ukuba ungathanda ukuba ujonge iposti yethu yangaphambili xa u-Irina Shayk wahluba zonke iimpahla zakhe zazifumana imagazini. Ukuba akulunganga, yonwabele le pic kunye nevidiyo engezantsi kunjalo!
U-Irina ubeka ze kwiimagazini kwaye ungqine ukuba ungomnye weyona modeli zintle kunye nosaziwayo baseRussia! U-Irina Shayk unolo jongo lwesifebe esibi kwaye akazange aphulukane nalo emva kokuba ezele intombazana egama linguLea de Seine! Nika u-Irina ingqalelo efanelekileyo yokuba le ngelosi eyimfihlo yaseVictoria izakwenza u-cum ngomzuzu, ke qala ukuchukumisa u-dick wakho ngoku!
Irina Shayk engenasiphelo
Isiphelo sikufuphi, kodwa ubuhle obungapheliyo buka-Irina Shayk buyaphikisana nexesha. Eli bhinqa lacela iphephancwadi elithandwayo i-Sports Illustrated kwaye labonisa iititi zalo eziqinileyo, iesile eliqinileyo, kunye neengono ezilukhuni! Amehlo akhe aluhlaza njengolwandle, kwaye ulwandle luthanda iimodeli ezidumileyo ezimanzi! Yonwabele imifanekiso ...
Imifanekiso ehamba noBrad pitt
I-karen gillan yezeze
Iicheryl cole pics ekrwada
imifanekiso enganxibanga yedi klum